Fungicide, nke a na-akpọ antimycotic, ihe ọ bụla na-egbu egbu nke e ji egbu ma ọ bụ gbochie uto nke ero. A na-ejikarị ero eme ihe iji chịkwaa ero ndị ọzọ nke na-emebi mmebi akụ na ụba na ihe ọkụkụ ma ọ bụ na-etinye ahụike nke anụ ụlọ ma ọ bụ ụmụ mmadụ n'ihe egwu. Kasị ugbo na ...
Jiri fungicides maka apụl skaab nchebe tupu atụ anya n'oge ọrịa oge
Okpomoku a kwagidere na Michigan ugbu a bụ nke a na-enwetụbeghị ụdị ya na-ejide ọtụtụ ndị na mberede na etu ngwa apụl si eto ngwa ngwa. Na mmiri ozuzo e buru amụma maka Fraịdee, Machị 23, na maka izu na-abịa, ọ dị oke mkpa na a na-echekwa cultivars nwere ike ịba nhịahụ site na nke a.
Mmelite biocides & Fungicides
Biocides bụ ihe nchebe na-egbochi igbochi nje bacteria na nje ndị ọzọ na-emebi ihe, gụnyere ero. Biocides na-abịa n'ụdị dị iche iche, dịka halogen ma ọ bụ ogige ọla, acid acid na organosulfurs. Onye ọ bụla na-arụ ọrụ dị mkpa na agba na mkpuchi, mmiri trea ...
Ejikọtara njikwa njikwa na-eme ka elekwasị anya na 2017 Greenhouse Growers Expo
Oge nkuzi na 2017 Michigan Greenhouse Growers Expo na-enye mmelite na usoro na-apụta maka imepụta ihe ọkụkụ griinụ nke na-emeju ndị ahịa ahịa. N'ime afọ iri gara aga ma ọ bụ karịa, enweela mmụba nke mmasị ọha na eze mgbe niile na otu esi ebe ngwaahịa ọrụ ubi anyị si arụ ọrụ ...